SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Zvokufunga nezvazvo: Kana uine urwere huri kukutambudza, zvakanakirei kuti ushamwaridzane nevamwe? Kana uri mutano, zvii zvaungaitawo kuti ubatsire anorwara?—Zvirevo 17:17.
Vakuru vari muungano yedu vanonditsigira chaizvo. Vanogara vachindibvunza kuti vazive kuti ndiri sei. Mumwe wavo akandiudza kuti kana ndiine zvandiri kuda kutaura naye ndimufonere chero nguva. Ndinotenda Jehovha mazuva ose nokundipa hama dzakadai!—Isaya 32:1, 2.
Zvokufunga nezvazvo: Hama neshamwari dzingakubatsira sei kuti utsungirire dambudziko rourwere raunaro?—Zvirevo 24:10; 1 VaTesaronika 5:11.
Sisi vangu vakandibatsira chaizvo kuti ndisagara ndichingonetseka nezveurwere uhwu. Vakanditi ndikaramba ndichinetseka ndaitozowedzera kurwara. Vakandikurudzira kuti ndirambe ndichinyengetera, nokuti Jehovha chete ndiye anonyatsonzwisisa dambudziko rangu kupfuura mumwe munhu.—1 Petro 5:7.
Ndakaona kuti hapana chakaipa nokumbonzwa kusuwa kana kunetseka nezvedambudziko ratingava naro nemhaka yokuti zvingori muvanhu kuti vanzwe kudaro. Asi hatizofaniri kuita kuti manzwiro iwayo azosvika pakutishayisa mufaro kana kuti kubva zvakanganisa ukama hwedu naMwari. Haasi iye anokonzera matambudziko edu uye haazombotisiyi chero bedzi tikaramba tichimunamata nemwoyo wose.—Jakobho 4:8.
Zvokufunga nezvazvo: Tingati Mwari ndiye anokonzera matambudziko atinosangana nawo here?—Jakobho 1:13.
Munhu wose anogona kusangana nematambudziko kunyange vaya vanonamata Mwari. Nemhaka yei?